Inona no mahasamihafa ny kW sy ny kVa? Ny fahasamihafana voalohany eo amin'ny kW (kilowatt) sy kVA (kilovolt-ampere) dia ny herin'ny herinaratra. Ny kW dia singa misy ny tena tanjaka ary ny kVA dia tarika misy heriny miharihary (na hery tena izy miampy hery miasa indray). Ny anton-kery, raha tsy voafaritra sy fantatra dia ...
Ireo tobim-pamokarana herinaratra mahaleo tena novokarin'i Hongfu Power dia nahita ny fampiharana azy ireo anio, na amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny famokarana indostrialy. Ary ny hividy génie diesel AJ dia atolotra ho loharano lehibe sy ho backup. Ny singa toy izany dia ampiasaina hanomezana herinaratra ho an'ny indostria na olona ...
Ahoana ny fomba hampihenana ny mari-pana entin'ny rivotra an'ny mpamokatra gazoala Diesel mpamokatra sety miasa, ny mari-pana coil anatiny dia avo dia avo, raha ny singa ho any amin'ny mari-pana ny rivotra dia avo loatra dia hitarika amin'ny famafana hafanana dia tsy mety, misy fiantraikany amin'ny fiasan'ny singa , ary mampihena ny servi aza ...
Diesel Generators: Izay rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny hividianana iray
Inona no atao hoe Generator Diesel? Generator diesel no ampiasaina hiteraka angovo herinaratra amin'ny alàlan'ny fampiasana motera diesel miaraka amina generator elektrika. Ny generator diesel dia azo ampiasaina ho toy ny famatsiana herinaratra maika raha sendra tapaka ny herinaratra na amin'ny toerana tsy misy ifandraisany amin'ny tariby herinaratra. Industrial ...
Ahoana ny fomba hanavahana ny hery lehibe sy miantona amin'ireo andiana gazoala diesel
Ahoana ny fomba hanavahana ny hery lehibe sy ivoahan'ny setan'ny generator Diesel Ny mpamokatra gazoala lehibe amin'ny herinaratra sy herinaratra dia matetika no afangaro amin'ny eritreritr'ireo mpivarotra hampisafotofoto ny mpanjifa, mba ahafahan'ny tsirairay mahita amin'ny alàlan'ny fandrika etsy ambany rehefa niresaka hevitra roa samy hafa izahay. ary ny mpomba ...
Torohevitra 10 ho an'ny fampiasana generator azo antoka amin'ity ririnina ity
Efa akaiky ny ririnina, ary raha maty ny herinaratrao noho ny oram-panala sy ny ranomandry, dia afaka mitazona herinaratra any an-tranonao na any amin'ny orinasa ny mpanamboatra herinaratra. Ny Ivotoerana Fitaovana Fampitaovana An-kalamanjana (OPEI), fikambanam-barotra iraisam-pirenena, dia mampatsiahy ny tompon-trano sy ny orinasa hitandrina ny filaminana rehefa mampiasa milina ...
Cummins dia manolotra sehatra compressor vaovao amin'ny Series 800 Holset Turbocharger
Cummins Turbo Technologies (CTT) dia manolotra fanatsarana mandroso amin'ny Series 800 Holset Turbocharger miaraka amina sehatra compressorer vaovao. Ny Series 800 Holset Turbocharger avy amin'ny CTT dia manolotra vokatra kilasy an'izao tontolo izao ho an'ny mpanjifany manerantany izay mifantoka amin'ny famoahana fampisehoana sy fotoana ambony amin'ny horsepo avo ...
Vidin'ny Generator, Generator 125kva, 200kw Generator, Magnetic Power Generator, Generator 240kw, Generator kely,